कुन्जना घिमिरेले आज चितवन पुगेरै खुलासा गरिन ! धुर्मुस संग रबिले के भने!(भिडियो सहित) – Nepal Insider
मुख्य पृष्ठ /भिडियो/कुन्जना घिमिरेले आज चितवन पुगेरै खुलासा गरिन ! धुर्मुस संग रबिले के भने!(भिडियो सहित)
कुन्जना घिमिरेले आज चितवन पुगेरै खुलासा गरिन ! धुर्मुस संग रबिले के भने!(भिडियो सहित)
रवि लामिछानेको समर्थनमा झापाको बिर्तामोडमा पनि विशाल प्रदर्शन भएको छ । शालिकराम पुडासैनी मृत्यु प्रकरणमा अनुसन्धानका लागि नियन्त्रणमा लिइएकारवि लामिछाने र पत्रकार युवराज कँडेलको थपिएको म्याद आज रबिबार सकिंदैछ । दोश्रो पटक थपिएको म्याद भोलि आइतबार सकिनै लाग्दा मुलुकभर उनीहरुको रिहाईको माग गर्दै प्रदर्शन जारी छ । समर्थकले भोलि आइतबार रबिको रिहाइहुने धेरै आशा गरेका छन् ।
रवि सर्मथकले रिहाई गर्न माग गर्दै शनिबार देशका विभिन्न ठाउँहरूमा प्रदर्शन गरिरहेका बेला झापाको बिर्तामोडमा पनि रिहायको माग गर्दे प्रदर्शन गरिएको हो । भ्रष्टाचार, बेथिति, अन्याय र लुटतन्त्र विरुद्ध भन्दै नेपालका लागि नेपाली नामक समूहले प्रदर्शन गरेको हो । समर्थकहरूहरुले प्रदर्शनको क्रममा रवि लामिछानेसहित पक्राउ परेका पत्रकार युवराज कँडेल र अस्मिता कार्की निर्दोष रहेको भन्दै नाराबाजी गरेका छन् ।
त्यस्तै सामाजिक अभियन्ता कुन्जना घिमिरे आज चितवन पुगेर आफ्नो धारणा राखेकी छन् । सामाजिक अभियन्ता अर्जुन भुसाल संगको बिशेष कुराकानीमा उनले भनेकी छन् धुमुस (सिता राम कट्टेल) रबि लामिछाने प्रहरी अनुसन्धान रही रहेको समय अर्को दिन उहाले भेट्नु भयो र बाकी बिस्तृत जानकारी सहित यो तलको पुरा भिडियो हेर्नुहोस :
मलेसियामा रोजगारीका लागि गएका नेपालीको निधन भएमा उनका परिवारले बाँचुञ्जेल तलब पाउने
को हुन् पल शाहले मन पराएर प्रेम प्रस्ताव राख्न नसकेकी युवती ? जसले नायक पल शाहको प्रेमलाई चिन्न सकिनन्
बागमतीको बाढीले सुकुम्बासी बस्ती डुबानमा (फोटोफिचर)
संसारकै पहिलो दुर्लभ घ’टना : एउटै व्यक्ति दुई पटक को’रोनाबाट सं’क्रमित !